Gudiga Fulinta Iyo Komishinka Dabagalka X.D.SH.S.I Oo La Doortay - Cakaara News
Gudiga Fulinta Iyo Komishinka Dabagalka X.D.SH.S.I Oo La Doortay
maraacaato (cakaaranws) Arbaca, 2da, November, 2016. waxa shirwaynihii 9aad ee XDSHSI maanta lagu doortay golaha gudiga fulinta XDSHSI oo ka kooban 15 xubood kuwaasi oo 2da sano iyo badhka soo socda hogaamindoona XDSHSI.
Haddaba, golaha gudiga fulinta XDSHSI ee la doortay maanta waxaa ku cusub oo kaliya 4 xubnood kuwaasi oo kala ah.
1. Faamudo Cabdilaahi Takhal maareeyaha wakaalada dhismaha jidadka DDSI.
2. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan wasiirka xafiiska jidadka.
3. Maxamed Cabdi Bare gudoomiyaha Gobolka Doolo.
4. Cabdimahad Maxamed Cabaas maareeyaha wakaalada Iibka iyo adeega gaarka ah DDSI.
Halka 11ka kale ay yihiin masuuliyiintii hore ugu jirtay gudiga fulinta iyada oo ay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka XDSHSI ay sidii hore yihiin. xubnaha gudiga fulinta ayaa markii la soo hordhigay shirwaynaha lagu ansaxiyay codbuuxa.
Dhanka kale waxaa isla maanta lagu doortay shirwaynaha 9aad ee XDSHSI komoshinka dabagalka iyo baadhista XDSHSI oo ka kooban 15 xubnood kuwaasi oo hadda ka hor ahaan jiray 13 xubnood. Balse shiwaynahan 9aad ee XDSHSI lagu ansaxiyay in ay noqdaan 15 xubnooda. Waxaana gudoomiyaha komishinka dabagalka iyo baadhista loo doortay marwo Ikraan cabdi xasan. Halka gudoomiye ku xigeenka loo doortay mudane Baashe Cabdi ismaaciil, sidoo kale waxaa xoghayaha komishinka dabagalka iyo baadhista loo doortay mudane cabdishakuur cismaan (dhagawayne) iyo 11 xubno ka ah gudigan kuwaasi oo shirwaynuhu ku ansaxiyay codbuuxa.
Shirwaynahan ayaa caawa xili danbe si qurux badan loogu soo gabagabeeyay tuulada maraacaato oo uu ka socday mudo sadex maalmood ah.